यस्तोपनि - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँचका लागि सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँचका लागि दार्चुला, बैतडी, कैलाली र कञ्...
भिडियो एक्सरे सेवा ठप्पः सेवाग्राही मर्कामा
सप्तरी । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको भिडियो एक्सरे सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । अस्पतालमा भिडियो एक्सरे मेसिन छ तर प्रयोगमा ल्याउने ज...
सिन्धुपाल्चोक कठरीका मञ्जु–भीमसेनबहादुर खड्का दम्पती राजधानीमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्थे। उनीहरूका तीन छोरामध्ये दुई थिए– रामकुमार र बालकृष्ण। उनीहरूको अवस्था देखेर एक दम्पतीले बालमन्दिरमा राखिदिन...
धनुषा । रामजानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवअन्तर्गत आज चौथो दिन जनकपुरमा तिलकोत्सव कार्यक्रम हुँदैछ । अयोध्यावाट आएका जन्तीलाई आज एक औपचारिक कार्यक्रम गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वागत गर्ने कार्यक...
बीबीसी । केही वर्ष अघि मैले डेनमार्कमा एक विन्टेज(पुराना) कार र्यालीमा भाग लिएँ । मेरो लागि यो एक सम्झना लायक प्रतियोगिता थियो । हुनत त्यो भिन्टेज कार र्याली थियो तर त्यसमा कारभन्दा बढी जोड फ्यान्सी प...
एजेन्सी । नासाले मंगल ग्रहमा अवतरण गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष यात्री महिला हुने बताएको छ । नासाका प्रमुख जिम ब्राइडेनस्टाइनले विज्ञान र प्रविधिमा आधारित रेडियो टक शो ‘साइन्स फ्राइडे’ मा मंगल ग्रहको पहिलो य...
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले २०६२ / ६३ को आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताको बिषय कहि कतै नउठेको भन्दै बिदेशी प्रभाव, दबाब र पैसाको प्रलोभनमा धर्म निरपेक्षता लादिएको बताएका छन् । हिन्दुत्व जनजागरण...
यौन पिपासुहरुले के रगतको साइनो पनि मान्दैनन ? समाज नराम्ररी विछृंखलित बन्दै जाँदा राजधानी काठमाडौंमा नै एउटा पाशविक घटना सार्वजनिक भएको छ । लेख्न पनि हात धर्मराउने , पढ्न पनि आँशु चुहाउनु पर्ने घटनाले...
ओमाउमा विरालो पाल्न प्रतिवन्ध
न्यूजिल्याण्ड । न्यूजिल्याण्डको ओमाउ गाउँमा विरालो पाल्न प्रतिवन्ध लगाउने योजना बनेको छ । अहिलेसम्म विरालो पालिरहेका मानिसहरूलाई आफ्नो विरालो मरेपछि नयाँ विरालो पाल्न दिइने छैन् । कुकुर, विरालो पाल्त...
६ वर्षीया बालिकाको विश्व चर्चित बन्ने सपना (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । भारत र पाकिस्तानको सामाजिक सञ्जालमा एक पाकिस्तानी बालिकाको भिडियो अत्यन्त चर्चित बनिरहेको छ । आफ्नो नाम फातिमा बताउने चलाख बालिकालाई तपाईको इच्छा के छ भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा उनी भन्छिन ‘व...
काठमाडौं । यो दुनियामा धेरै कम त्यस्ता व्यक्ति छन् जो आफ्नो देशको नाम बदल्नसक्छन् । यस्तै उउटा नाम हो राजा मस्वाती । अफ्रीकाको अन्तिम साम्राज्य स्वाजिल्याण्डका राजा मस्वाती तृतीयले बुधवार आफ्नो देशको ...
चीनमा आमाबाबुको निधन भएको चार वर्षपछि बच्चा जन्मियो
काठमाडौं । चीनमा कार दुर्घटनामा परी दिवङ्गत भएको एउटा दम्पतीको चार वर्षपछि सन्तान जन्मिएको छ । बच्चा जन्माइदिनका लागि कोख भाडामा दिने आमा ‘सरोगेट मदर’ मार्फत् ती बच्चाको जन्म भएको चीनका सञ्चारमाध्यमहर...
डाक्टरले आफ्नै शुक्राणुबाट महिलाहरुलाई यसरी बनाए गर्भवती
काठमाडौं । क्यानडाका एक फर्टिलिटी (प्रजनन) डाक्टरलाई आफ्नै वा अन्य अनजान व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोग गरि गर्भाधान गरेको आरोपमा एक दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा ...
सुन्दै अच्चम, एक सय एक बर्षीया बृद्धाले जन्माईन बच्चा
एजेन्सी । सुन्दै अच्चम लाग्ने इटालीमा एक सय एक बर्षीया महिलाले बच्चा जन्माउकी छन् । महिलाले कति वर्षसम्म बच्चा जन्माउन सक्ला ? प्रजनन् क्षमता भनेकाे एक महिलाले १५ बर्ष देखी ४५ बर्ष सम्म बच्चा जन्माउ...
यौन सम्पर्क अघि के चाहान्छन् महिला ? जानिराखौं !
काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध भनेको दुई महिला पुरुषबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ। यस विषयमा धेरै अध्यन...
‘श्री’ मोदी नभनेको भन्दै एक जवानको सात दिनको तलव काटियो
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नामको अगाडि ‘श्री’ नलगाउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल बिएसएफका एक जवानलेसात दिनको तलब गुमाउनु परेको छ । गएको फेब्रुअरी २१ मा बंगालको नादियाको महतपुरमा रहे...
चन्द्रमामा ‘फोर जी’ सञ्चालन योजना
काठमाडौं । कतिपय मोबाइल प्रयोगकर्ताले तीव्र गतिको फोर जी नेटवर्कको प्रयोग गर्न नपाइरहेका बेला चन्द्रमामा त्यसको शुरूवात गर्न लागिएको छ। भोडाफोन जर्मनी र नोकिया कम्पनी मिलेर चन्द्रमामा फोर जी सञ्चालनम...
मृतक छोराको वीर्यबाट यसरी हजुरआमा बनिन् एक आमा
काठमाडौं । दुई वर्ष पहिले क्यान्सरका कारण छोरा गुमाएकी एक आमाले उनलाई ‘पुनर्जीवित’ गरेकी छन् । पुणेकी ४९ वर्षीया शिक्षक राजश्री पाटिलले एक सेरोगेट आमाको मदतमा अविवाहित छोरा प्रथमेशको जुम्ल्याह बच्चा प...
१३ सन्तानको अधिकार जापानी बुवालाई
मङ्लबार, फाल्गुन ८, २०७४
काठमाडौं । थाइल्याण्डको एउटा अदालतले कोख भाडामा दिने आमाहरूबाट कम्तीमा १६ जना सन्तान जन्माएका एक जना धनी जापानी पुरूषलाई १३ सन्तानको पूर्ण स्वामित्व दिने फैसला सुनाएको छ। ती बालबालिकालाई साढे तीन वर्...
झोलासँगै एक्सरे मशिनमा महिला छिरेपछि …..
काठमाडौं । के तपाईँलाई सुरक्षा जाँचका क्रममा आफ्ना झोला चोरी हुन सक्ने चिन्ता लाग्छ ? यस्तै चिन्ता लागेर एकजना चिनियाँ महिला आफ्ना झोलासँगै एक्सरे मशिनमा छिरिन्। दक्षिणी चीनको डुङ्गुआन रेल्वे स्टेशनक...